Astaamuhu waxay dib ugu laabanayaan dib-u-celinta sida ay muujiyeen noocyada waaweyn | Abuurista khadka tooska ah
Naqshadeynta astaanta, sida dhinacyada kale ee isbeddellada dejisa xawaaraha, waxaa suurtagal ah in lagu soo noqdo astaamahaas oo aad loogu aqoonsaday sannado kale. Waa wakaaladda ka dambeysa cusboonaysiinta sumadda Kodak, taas oo tilmaamaysa taas isbeddelka dib loogu noqdo astaamaha dib u noqoshada waxay noqoneysaa xaqiiqo jirta.
Waxay ku jirtaa taas ujeedka aan kala go 'lahayn ee cusboonaysiinta, oo ay dalbadeen adduunka iyo nidaamka aan isku aragno, noocyada ayaa u muuqda inay dib u soo celiyaan oo ay kumanaan kun u rogaan astaamahan, si ay ugu dambeyntii u xumeeyaan qaar ka mid ah qodobbada ugu caansan ee waqtiyada kale. Kodak, Co-op iyo NatWest ayaa dib u soo celinaya astaamo horay loo isticmaali jiray halkii laga abuuri lahaa mid cusub.
Astaamaha ugu taariikhiga ah badanaa waxay la xiriiraan noocyadaas iyada oo waxa hilaadin iyo waayo-aragnimo ah taas ayaa iyaga ka duwan taxanaha tartanka yar. Marka laga reebo isbeddelka hadda jira ee dib ugu noqoshada calaamadaha, naqshadaha cusub ayaa sidoo kale wax ka qabanaya wixii dhacay 60s iyo 70s.
Kodak waa tusaalaha cad iyadoo la soo celinayo astaamihiisii ​​rasmiga ahaa ee uu naqshadeeyay Peter J. Oestreich sanadkii 1971. Astaanta waxaa loo isticmaalay 35 sano. Keira Alexandra, lammaanaha hay'adda Work-Order, ayaa sidan ugu sharraxaysa:
Ma dhihi lahaa waa uun nostalgia. Intaa intaa ka badan, waa dib ugu noqoshada mabaadi'da shirkadda iyo xididdadiisa, oo muujinaya ballanqaad ay fulinayaan. Haddii aasaaska uu xoogan yahay iyo / ama uu leeyahay qiime dhaxal gal ah, adeegso.
Kaliya kuma dhacdo logos, laakiin way noqon kartaa fiiri moodada, muusiga, isboortiga iyo dhaqanka oo ah isku day la doonayo in lagu ilaaliyo taariikhdaas magacyada caanka ah ee sheegta in lagu caddeeyo waxa iyaga caan ka dhigay.
Sawirkii hore ee sumadda Bacardi waxaad mar kale ku arki kartaa sida uu noqdo fiidmeer aad u macquul ah sida astaamaha u dhexeeya 1890 iyo 1931.
Bruce Duckworth, oo leh 24 sano oo khibrad ah sida naqshadeeyaha guud ee Turner Duckworth, ayaa yidhi:
Noocyada had iyo jeer waa iyagoo raadinaya habab ay ku kala fogaadaan isla markaana khuseeya macaamiisha. Haddii sheekadaada iyo waayo-aragnimadaadu ay ku darsato sheekadaada iyo xaqiiqdeeda qiimo weyn ayey leedahay in la xusuusiyo macaamiisha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » Calaamaduhu dib ma u noqdaan?
5 talo si loo sameeyo astaan ​​xirfadeed